En pulsoximeter (saturationsmätare) waa shay/walax akhriyeysa caddadka ama tirada ogsijiinta ee dhiiga ku jirta iyadoo la kaashanayo sensuur. Sensuurka waxa lagu xirayaa gacanta ama lugta. Wuxuu leeyahay nalal yaryar (dioder) oo laba mowjadood oo kala dhaadheer nalalka u kala daaraya. Wixii intaa ka dambeeya ayaa cabbirka ogsijiinta la xisaabinayaa. Xisaabinta waxa lagu salaynayaa ogsijiinta dhexmaraysa dhiiga ee uu hodanka ka yahay. Haddii uu imuhu aad u dhaqdhaqaaqo xisaabintu si ku meelgaara ayey u khaldamikartaa.